Forum serasera malagasy VAOVAO MATV 31 JANVIER 2012 - Dinika forum.serasera.org
VAOVAO MATV 31 JANVIER 2012
Fitohizan'ny hafatra : VAOVAO MATV 31 JANVIER 2012
rijadolly - 01/02/2012 00:32
Nihaona androany ireo mpikambana ao amin'ny kaomisiona manokana mandinika ny fampiharana ny sori-dalana sy ny mpikambana ao amin'ny Filan-kevitra Ambonin'ny Tetezamita.
Anisan'ny efa nolanian'ny CT sy CST tao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana faharoan'ny parlemanta ny lalana mikasika ny CENI. Tsy mbola misy aloha ny fanovana nentina teo anivon'ny CENI.
Efa eny amin'ny parlemanta ny lalam-pifidianana. Ho an'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Mamy Rakotoarivelo, dia tokony ny fametrahana ny fahatoniana eto amin'ny firenena no atao laharam-pahamehana.
Nitondra ny fijeriny ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ihany koa ny antoko Madagasikara Mandroso, tarihan'ny minisitry ny Raharam-bahiny teo aloha, Yvette Sylla. Ho azy dia ilaina ny fanovana ny fitantanan-draharaha.
Manoloana ny tsy fisian'ny fanapahan-kevitra nivoaka nandritra ny fivoriana antampon'ny vondrona afrikanina farany teo dia nilaza Cyril Rasambozafy fa natao anjorombala ny raharaha Madagasikara.
Noroahana tsy ho mpikambana ao amin'ny vondrona politika Les autres sensibilités na les AS intsony Razanakoto Marcellin, filohan'n'y KMDT sy Mamodhoussen Irsade, filoha mpamorona ny FBM.
Nihaona tamin'ny mpanao gazety androany Me Radson Solo, izay isan'ny mpiaro ny vondrona Tiko ao anatin'ny raharaha mampifanolana ity orinasa ity amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria.
Androany dia nanatanteraka fivoriambe ny sendikan'ny mpitsara Malagasy. Fantatra taorian'izay fa mitohy ny fitokonana izay tanterahan'izy ireo.
Tonga ny faran'ny herinandro teo, tao amin'ny Frét Ivato ny nofo mangatsiakan'i Ralimamonjy Suzanne izay tovovavy malagasy niasa tany Liban.
Amin'ny vanim-potoana ny orana tahaka izao dia maro ireny scooter ireny no mila fanamboarana. Ny Â« carburateur Â» sy ny Â« bougie Â» matetika no tena voa amin'izany.
Ny asabotsy izao no hivoaka ny andiany faha-11 amin'ny tantara Malokila. Manamarika ity andiany ity ny fisian'ny mpilalao vaovao. Mbola mijanona kosa anefa ireo mpilalao teo aloha izay nanao ny fandraisana sary tany Chine.
Manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana amin'izao dia maro ny olom-pirenena no misafidy ny hivatsy hatrany ny fitaovam-piadiana fiarovan-tena tsy mahafaty.
Nitondra ny heviny ny pasitera Nestor Razafindramanitra avy ao amin'ny FINONA, manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny.
Tany Nosy Be indray ny faran'ny herinandro teo no nanohy ny asa sosialy fanaony Renée Rajaonarivelo.
Fotoan-dehibe teny amin'ny FJKM Soamiavaka Filadelfia omaly. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tokoa ny fankalazana ny faha-80 taona niorenany.
Page rendered in 1.9764 seconds